काँग्रेस नेता पौडेलको ओलि लाइ प्र’श्न : भारतलाई किन चि’ढ्याउनुभयो ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
काँग्रेस नेता पौडेलको ओलि लाइ प्र’श्न : भारतलाई किन चि’ढ्याउनुभयो ?
काठमाडौं । प्र¥मुख प्रति¥पक्षी दल नेपाली कां¥ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौ’डेलले वर्तमान प्रधानम¥न्त्री केपी शर्मा ओलीको शै¥ली र कार्यशै¥ली नै नराम्रो भएको भन्दै मार्गप्र¥शस्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षा¥त्कारमा बोल्दै नेता पौडेलले नेकपाले प्रा¥प्त गरेको जनमत ऐतिहासिक भएको भन्दै सो जनमतअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको टिप्प¥णी गरेका हुन् ।
उनले भने,‘नेकपाले प्रा¥प्त गरेको यो जनमत सायद अरुले प्रा¥प्त गरेको छ । प्रदेश सरकारको कुरा गर्दापनि ७ वटामध्ये ६ वटामा नेकपाको सरकार छ । जनताले यो भन्दा बढि सम¥र्थन कसैलाई दिन सक्दैनन् । म प्र¥श्न गर्न चाहन्छु जनताले कतिसम्म सम¥र्थन गर्यो भने यो सरकारले काम गर्ने हो ?’पौडेलले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा पारित गरेको पर्दा¥भित्र आफूले गरेका सबै कुकृ¥त्य लुकाउन खोजिएको आरो¥प लगाएका छन् । वर्तमान सरकारले जनताको जनजीवन उका¥स्न केहीपनि काम नगरेको उनको भनाइ छ।
उनले भने,‘कोभिड निय¥न्त्रणको लागि केहीपनि नगर्ने, अनि सबै कुरा नक्सा जारीमा देखाउन खोज्ने । यसकै पर्दा¥भित्र धेरै नराम्रा काम भए । यो सरकारले कोभिड–१९ निय¥न्त्रण गर्न सकेन् । मैले पूर्वा¥ग्रही भनेर भनेको होईन् । कोभिडको जोखिमका बावजुदपनि सरकारको विरो¥धमा सडकमा विरो¥ध तथा प्रद¥र्शन भैरहेका छन् । प्र¥तिप¥क्षको पनि सरकारले धेरै सहयोग प्रा¥प्त गरेको स्थि¥ति हो । यति धेरै सहयोग प्रा¥प्त हुँदापनि यो सरकारले केहीपनि गर्न सकेन ।’उनले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट नेपाल आउने नेपालीहरुलाई नआउ भनेर दिएको अभि¥व्यक्ति उल्लेख गर्दै भने–‘बरु उहाँले के भन्नुपर्द¥थ्यो भने म तपाइँहरुलाई बोलाउँछु । धैर्य¥तासहित अहिले त्यहीँ बस्नुहोस् । म घर पुर्या¥उँछु भन्नु¥पर्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीले यति भनिदिएको भए कोरोना निय¥न्त्रणमा सहयोग पुग्दथ्यो । तर, उहाँको अभिव्य¥क्तिका का¥रण आज को¥रोना निय¥न्त्रण हुन सकेन ।’
उनले सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशभरिका क्वारेन्टिन भेडाबाख्रा¥को खोरजस्तै भएको पनि टि¥प्पणी गरे ।सरकारले प्र¥काशित गरेको निर्देशिकाअनुसार लक्षण नभएकालाई अब क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुलाई को¥रोना नै परीक्षण नगरी घर पठाउने भनिएको पनि उनले आक्रो¥श पोखे । नेपालका नयाँ नक्सा पारित गर्दा त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको कुरामा आफूहरुले प्रशं¥सा गरेको पनि उनले सुनाए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्ने क्र¥ममा ‘सिंह मयते जयते’ किन भन्नुभयो र भारतलाई किन चि¥ढ्याउनुभयो ? भन्ने पौडेलको प्र¥श्न छ । भारतबाट क¥डा को¥रोना आयो भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि उनले आप¥त्ति जनाए । उनले अघि थपे,‘के नेकपाभित्र भएका सबै मान्छे भारतका द¥लाल हुन् ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो म¥र्यादा कायम गर्न सक्नुभएन ’
आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रोसँग ने¥तृत्व गर्न नसकेको भनेर यसअघि नै नि¥श्कर्ष निकालेको पनि उनले स्म¥रण गराए । पौडेलले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्य¥शैली र यो¥ग्यताको बारेमा प्र¥श्न पहिल्यै उठाइसकेको सुनाए । उनले थपे,‘कांग्रेस ५ वर्षको लागि सरकारमा जाँदैन । हामीलाई यो म्या¥ण्डेट प्रा¥प्त छैन । नेकपाले नै हो सरकार चलाउने । देउवाले सत्तामा जाने चे¥ष्टा गर्नुभयो भने उहाँले पार्टीबाट सम¥र्थन पाउ¥नुहुुन्न ।’उनले सरकारको कार्यशै¥लीका का¥रण आफूहरु सडकमा जानुपर्ने पनि सुनाए । यस्तो अवस्थमा पनि कां¥ग्रेसले प्रति¥पक्षी नै नभएकोजस्तो गरि समर्थन गरेको उनले स्प¥ष्ट पारे । भारत र चीन नेपालका मित्ररा¥ष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै द्धि¥पक्षीय सम्बन्धमा देखिएका स¥मस्या आपसमा बसेर मिलाउन जरुरी रहेको पनि उनले स्प¥ष्ट पारे । उनले केपी ओली प्रधानम¥न्त्री रहेसम्म सिमा वि¥वाद समाधानको लागि भारतसँग वार्ता नै नहुने ठो¥कुवा गरे ।स्रोत रातोपाटि
Previous ओलिको राजिनामा मागे पछि जनता सडकमा “हामीलाई नेकपाको धेरै माया छ, नेताहरु मिल्नुहोस्”,,,,हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।
Next प्रचण्ड भारतीय एजेण्ट भएको खुलासा ! तेसै ले देशको हितमा काम गर्दैनन…हेर्नुहोस।